Ungayinceda njani iMickey Mouse ukuba uyiPhathe uMthetho woMtsalane- - Umthetho Wokutsala
Inokukunceda njani iMickey Mouse ukuba uyiqonde kakuhle iMithetho yoMtsalane
Yonke imihla, abathengi bandibuza ukuba ndilufumana njani uthando, ikhondo lomsebenzi, ukuzithemba kunye nempumelelo abaphupha ukuba nayo. Impendulo yam ihlala ifana; coca iibhloko zakho, woyise uloyiko lwakho, kwaye ube ngumthetho woKhenketho iBadass .
Ukuba awukaqhelani noMthetho woMtsalane, ichazwa njengamandla okutsala ebomini bethu nantoni na esijolise kuyo. Namhlanje, uMthetho woTsalo ngumzi mveliso we-gazillion yeedola kunye nenkqubo yokuzinceda ngempumelelo. Nangona kunjalo, imvelaphi yayo ikholelwa ekubeni isekelwe kwiimfundiso zikaBuddha - ngakumbi kule 'nto uyiyo uyile nto ubuyicinga'.
Ngoku, ukuze ube ngumthetho woKhenketho uBadass woyika kufuneka ujongane nawo kwaye uthintelwe. Njenge ophakathi oqeqeshiweyo Ndihlala ndibona ingcambu yokoyika kwabaxhasi- kobu bomi nakubomi bangaphambili.
Xa kulunge kakhulu kumthengi, uMoya uyandicenga ukuba ndizise le micimbi kufundo lwabo. Oku kunokungonwabi kubathengi kuba, hee, ngubani ofuna ukujongana nesithunzi okanye enze umsebenzi wesipili, akunjalo? Kodwa uMoya akaze udanise kwaye uhlala uthumela ngoMthetho owoyikekayo weengcebiso zoMtsalane kunye nobuchule bomphefumlo ngamnye oMhle.
Izandi ziluncedo kwaye ziyaphilisa, huh? Ewe. Ewe, kule nyanga iphelileyo, lithuba lam lokujongana nesipili esoyikekayo, isipili eseludongeni. Gcwalisa ngama-villains, amaqhawe kunye nezilwanyana zomoya, oh yintoni i-movie ye-Disney.
Umhlaba omangalisayo weWoo Woo
Kudala-dala kumhlaba okude, okude kakhulu, bendineshishini elikhulu ngokwenene. Ke, ngo-2007, andizange.
Kwakunokukhetha kwam ukuhamba kuba, emva kwethutyana, imeko yemfazwe yandidika. Ndithathe isigqibo sokwenza inyani eyahlukileyo kum kunye nee-Aristocats zam ezisi-8. Ndabuyela ekhaya kwilizwe lokucinga kwakhona kwaye ndacinga injongo eyahlukileyo yobomi. I-Metaphysics yaba lihlabathi lam elitsha.
Kule minyaka ili-10 idlulileyo bendonwabile ukuthetha nabantu abafileyo kunye nezilwanyana, ndincedisa ekufumaneni abantu abalahlekileyo, kwaye ndinikezela ngayo nayiphi na imiyalezo yemijelo yoMoya ngam.
Ndenze ii-2 zezona webhusayithi zinkulu ze-metaphysical kwi-Intanethi- Imihla ngemihla iHososcope Astros kwaye WhatIsMySpiritAnimal.com .
Ndineofisi encinci emnandi.
Ndisela ibhiya echibini lethu ngelixa ndikhwele i-unicorn steed yam ethembekileyo.
Ndibiza ubomi bam 'liLizwe eliMangalisayo leWoo Woo'.
Ubuncinci de ndade ndaphupha apho ndandiqala khona ukufundisa kwakhona. Owu, emva koko ndafunda ukufundwa kweenkwenkwezi oku-2. Isazi ngeenkwenkwezi ngasinye sityhile ukuba itshathi yam ibonakalisile ukuba ndizalelwe ukuba ngutitshala kwaye ukuqala ngo-2017 ndiza kube ndifundisa kakhulu. Kwaye coup de gras? Ngokwetshathi yam, ndiza kube ndifundisa kule minyaka ili-17 izayo.
Ngelo xesha ilizwe lam elitsha liphela laba yindawo yoBusuku kwiNtaba yaseFalasia evela eFantasia. Uyazi. Xa iChernabog iphakamisa yonke imimoya emibi kwabafileyo? Yandinika amaphupha amabi xa ndandisemncinci kwaye yayingancedi ngoku, nayo.
Isibuko, isipili eludongeni, ngubani oyikekayo kubo bonke?
'Ubomi benziwe ngezibane kunye nezithunzi, kwaye ngekhe sibe sinyanisile, singanyanisekanga, kwaye senze ingcwele ukuba sizama ukwenza ngathi akukho zithunzi.' -Walt Disney
Indoda ye-aries scorpio umfazi ebhedini
Uyawukhumbula umsebenzi wesipili endikhe ndawukhankanya ngaphambili? Inxalenye yeshishini lam kulomhlaba ukude, kude bekubandakanya ukufundisa. Ininzi kunye nokufundisa okuninzi.
Ukubandakanya ukufundisa kwi-metaphysics practice kuthetha ukusebenza nabantu abaninzi-njengamaqela. Uloyiko. ANDifuni ukuba lapho bakhoyo abantu.
Nokuba ndijamelene noloyiko lwam ngabantu, ndingafumana indawo enkulu yeofisi. Oko kuthetha ukuzibophelela okukhulu kwezemali. Kwaye awuzange wonwabe de ube uhambisa i $ 3,000.00 ngenyanga indawo yeofisi.
Ukukhaba nokukhala yonke indlela, ekugqibeleni ndavuma ukuba ndiyaphoswa kukufundisa. Pha. Nditshilo.
Kuthekani ukuba ndiyazibophelela kule ndlela kwaye yonke into iqhuma ebusweni bam - kwakhona? Kuthekani ukuba ndiziqhushumela ebusweni bam - kwakhona? Kuthekani ukuba ishishini lam likhula likhulu kwaye liphumelele ngakumbi- kwakhona?
Konke ngaxeshanye ndiye ndahamba ndaya ekubeni nguMthetho woKhenketho waseBasass ndaya ekubeni yiFlounder eLittle Mermaid. Hayi ngesini.
Eyona ngxaki inkulu ibikukuba, nangaliphi na ixesha andiyihoyanga kwaye ndiyithobele imiyalezo evela kuMoya sonke isihogo sophuka kwaye akukho mntu ufumana ixesha. Ke ndatsala i-shitake yam ndaza ndacamngca nzulu.
Ndathandazela uloyiko lwam ukuba lutshintshwe yimibono yendlela endinokuthi ngayo ndisebenze ngakumbi njenge-metaphysician. Ndacela iZilwanyana zam zoMoya ukuba zinike ukucaca okupheleleyo kunye namandla okujolisa kwinto ENDIYIFUNAYO endaweni yokujonga kakhulu kwinto endingayifuniyo (uloyiko).
Ngaphandle kwesigwebo, ndayihlonipha eyam imfuno ye-neurosis ngokucela ukuba uMoya andithumele uphawu olucacileyo nolungenakuphikiswa. Ndidinga ukwazi ngaphaya kwesithunzi sokuthandabuza ukuba amaphupha am awokuqonda kwangaphambili kwaye Mbini abavumisi ngeenkwenkwezi babenyanisile.
Ithetha ntoni inombolo yam yokubhula
Ndade ndathi kuMoya ndiza kuqala ukukhangela iofisi enkulu kodwa kuya kufuneka indithumele isiqinisekiso ngohlobo loMoya wam, iTotem, Kunye Nesilwanyana Esinamandla-iBhele.
Uqikelelo lwethamsanqa! Amakhubalo ethamsanqa! ' UJohn omncinci (uRobin Hood)
Ngomhla emva kokucamngca kwam, ndakhangela iiofisi kwiCraigslist. Ngelixa bendisenza njalo, bendinethuba lokuthetha nomphathi wesakhiwo esikuloo ofisi ndikuyo ngoku. Ngenxa 'yesizathu esithile' wandixelela ukuba zazimbini izithuba ezikhulu ezikhoyo - kwisakhiwo esinye. Wowu, ngoku kukho ukungqinelana okuthile '(utsho ngayo yonke impoxo anokuyithetha).
Emva kokubuza malunga nemirhumo yerenti, ndacela ukubona enye yeendawo.
Nantsi into eyenzekileyo:
Wabona indawo okokuqala. We ethandweni. Ngaba kukho olunye uhlaselo oluhlaselayo.
Wabona indawo okwesibini. Yehla nzulu eluthandweni. Ndikhathazekile ngenxa yokungakwazi ukuloba uloyiko lwam.
Wabona indawo okwesithathu. Ndijongene nenyaniso yokuba i-traumas zangaphambili aziphiliswanga. Ibhiya enxilileyo.
Ngaba umsebenzi oqinisekileyo, wokuhlekisa kunye nowokuphilisa awenzeki.
Ubone indawo ixesha lesine. Ubone umqondiso ocacileyo nongenakuphikiswa ovela kuMoya.
Ndikhuphe amehlo am ngaphandle. Isayinwe ngokomoya Isivumelwano soMphefumlo ukuqala ukufundisa nokuthatha indawo.
Zingaphi izinto eziMangalisayo ezinokubanjwa nguMqolomba omnye?
'Ngandlela thile andikholelwa ukuba kukho naziphi na iindawo eziphakamileyo ezingenakunyuswa yindoda eyaziyo iimfihlo zokwenza amaphupha azaliseke. Le mfihlelo ikhethekileyo, kubonakala kum, inokushwankathelwa kwiiC ezine. Banomdla, ukuzithemba, isibindi, kunye nokuzingisa. ' -Walt Disney
Ixesha lesine ndibuyile ndisiya kubona indawo umphathi wesakhiwo athi, 'Uyandibulala. Nasi isitshixo. Zinkqonkqoze ngaphandle. '
Oooo! Ngendindedwa! Ndingayifumanisa iofisi ukuze amandla ayo atshintshe kwaye aqale ukundinceda ukuba ndenze intshukumo egudileyo neyonwabileyo!
Ngefaf yesiqhumiso esivuthayo kunye namasiko eShamanic ngendlela enqabileyo ndadanisa ngomsi. Imiboniso yabathengi abonwabileyo kunye noNwabile kum enxibe imizila yeenkungu ezi-5 ezivuthayo iinkuni zeNag Champa.
Hayi. Xa nditshaya, andiyikudlala.
Endleleni yokuphuma emnyango, ndeva indawo yokugcina izinto kwifoyer isithi, 'NDIYA kuba lapho abantu bakhoyo'.
Ewe. Igumbi lokubonelela lathetha nam. Yonke into inamandla. Yonke into iyaphila. Yinzululwazi.
Zonke iinwele zomzimba wam zime nkqo. Ndisazi ukuba bekufanele ukuba ndiyayivula ikhabethe kwaye ndiyibethe, nayo. Ndiyazi ukuba kukho into ebalulekileyo ekwelo khabhathi. Into emnandi kukuba, ibingenanto kwaphela ngamanye amaxesha ama-3 bendikhe ndayijonga indawo.
Ndithe chu, ndavula umnyango wekhabethe. Ndade ndema emva komnyango, ndisebenzisa njengekhaka ukuze ndizikhusele kuyo nantoni na eyayichwechwela kwiishelufa zayo ezimnyama. Xa indoda eyayisisithulu ingaphumanga, ndamisa intloko yam ngasemnyango ukuze ndibone ngaphakathi.
Intliziyo yam yema xa ndihlola ishelfu yesine. Umqondiso ocacileyo ongenakuphikiswa ovela kuMoya wawulapho.
Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, ikhabethe lalingenanto kwaphela ngaphandle kweeshelfu. Ngoku, bekukho isitshixo ngeqhosha lesitshixo seMickey Mouse. Kwaye ayisiyiyo nayiphi na ingqondo kaMickey oyikhumbulayo - uMfundi ofundela uMickey.
Ngaphambi kokuba uthi, 'Wacela ibhere. Ayilo bhere elo. Yimpuku leyo. ' - funda kwi ...
Owu, usizi olulungileyo. Ndiyalila kwakhona.
Kuzo zonke iimpawu ezicacileyo nezingenakuphikiswa ezivela kuMoya le yayinguye. Kukho umqondiso omninzi kwisikhuseli seSchools sikaMickey Mouse esitshixo sokuba ndenze i-info-graphic ukuzama nje nokucacisa konke.
Ngaphandle kweMickey Mouse ekubeni ngumyalezo obalaseleyo ovela kuMoya, kwiinkcubeko zaseAsia nakwiZodiac yaseTshayina, iimpuku kunye neeRats ziimpawu zethamsanqa kunye nokukhuthala kwishishini kunye nokwakha ubutyebi. Ndifuna uphawu olucacileyo nolungenakuphikiswa, akunjalo?
Ndiyathemba ukuba asiyi kuphulukana nento enye - ukuba yonke le nto iqalwe yimpuku. -Walt Disney
Ke, zonke ezi zinto zoMkhafuli / uMickey Mouse zinantoni yokwenza ne-Bear Spirit Animal endiyicelileyo?
Ngaba ukulungele oku?
Igama lam ndinguBernadette. Yinto yobufazi begama lesiFrentshi elithi Bernard. Uguqulelo lokoqobo lukaBernard 'lisebe elinesibindi'. Umama walwa notata wethu njengezidenge zokundithiya igama 'Bernadette'. Ikwangulowo wandithiya igama elithi 'Mickey Mouse'.
Yabona kuqhubeka ntoni apha? NDIYIMPUKA. NDINGUBhele. Imouse yiBhele. Ibhere yiMpuku. Ngokwezona zinto zichazayo, ndibonakalisile njenge Mna, ye ngokwam. Le yindlela iMickey Mouse enokukunceda ngayo ukuba uqonde umthetho woMtsalane! Ekupheleni kosuku, kuya kufuneka uzibonakalise ngokwakho.
Umoya, umama wam, kunye nam 'ngokwam' babonisa ukundazisa ukuba ndingakwenza oku! NDINGUYE lo. Ndingutishala. Thina, abathathu, sikwabonakalise ukuxhasa ingqondo yam eyokuqonda xa ekugqibeleni yavuma / yaqonda ukuba lixesha lokujongana neenzingo zangaphambili kunye noloyiko lwangoku.
sithini isikhundla sejupiter kwinkqubo yelanga
Amava andithobe njengezinto ezimbalwa ezinazo. Yayiyifilosofi engenazingxaki kuphela endandiyifuna. Umthetho wam wokutsala i-Badassery ubuyile!
Ndaluphelisa uloyiko lwam; ibambe indawo engcwele yomqondiso ogqibeleleyo ukubonisa kwaye yenzekile!
Nokuba unaliphi ithemba kunye namaphupha, thetha inyani yakho kwaye uwamkele. Nangona kunjalo ubizelwa ukukhonza ubuntu-cela uncedo, fumana uncedo, themba ukuba awuwedwa. Umhlaba kunye nookhokho bakho baya kubonakala ukukunceda. Uya kuvela ukuze uzincede.
Umthetho woMtsalane awusebenzi kwabanye hayi kwabanye. Isebenza kuye wonke umntu. UNGUMTHETHO WOMTSHATO.
Ke xakeka! Unomtsalane omninzi wokwenza kunye nenyani yokwenza!
Okokugqibela, ungaze ulibale ukuba iphupha ngumnqweno owenziwa yintliziyo yakho. UCinderella wayeyazi le nyaniso kwaye wayethembele kuyo. Jonga indlela obuye baphelela ngayo ubomi bakhe!
Olu ngeno lwaluthunyelwe kwi Umthetho woKhenketho . Yenza i Bookmark kwi unxibelelwano . NgoFebruwari Horoscope 2017 Indlela uSuku lweValentine olunokuKwenza ngayo ukuba ube nguMthandi ongcono
Umhlaza wendoda kunye ne-virgo umfazi ebhedini
Isikhundla se-uranus kwinkqubo yelanga
Iza nini i-halley's comet ijikeleze
yeyiphi iplanethi esondele kakhulu emhlabeni ngoku